ဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ဗွီဒီယို၏သက်ရောက်မှု | Martech Zone
တနင်္လာနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 10, 2014 Douglas Karr
ဒီမနက်မှာနှစ်နှစ်အကြာငါတို့နဲ့အတူရှိနေခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တစ်ယောက်ဆီကိုအစီရင်ခံစာတွေပို့ခဲ့တယ်။ ၎င်းတို့တွင်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထက် ၂၀၀% နီးပါးနီးပါးသက်ဆိုင်ရာရှာဖွေမှုလမ်းကြောင်းတိုးပွားလာသော ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကောင်းမွန်ပြီး ၀ ယ်ယူသူများအားမှတ်ပုံတင်ရန်နှင့်သူတို့၏ဖြေရှင်းချက်ကိုစတင်လေ့လာရန်ဆွဲဆောင်ရန် infographics နှင့် whitepapers အမျိုးမျိုးရှိသည်။ သူတို့ site မှပျောက်ဆုံးနေတဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာကဗီဒီယိုပါ ၀ င်သည်။ အွန်လိုင်းကိုယှဉ်ပြိုင်လိုသည့်ကုမ္ပဏီတိုင်းအတွက်ဗွီဒီယိုသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။
ဤ ဗီဒီယို Explainers ကနေ infographic သင်၏အလုံးစုံသောဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်အပေါ်ဗီဒီယို၏သက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်တိကျသောရုပ်ပုံလွှာကိုဆွဲသည်။ ကိန်းဂဏန်းများသည်အလွန်အံ့အားသင့်စရာဖြစ်သည်။
အကြီးတန်းအမှုဆောင်အရာရှိ ၆၃ ရာခိုင်နှုန်းသည်ရောင်းချသူ site ကိုလာရောက်ခဲ့ကြသည် ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးနောက်.
လက်လီဆိုဒ်များရှိဗီဒီယိုများ ပျမ်းမျှ2ည့်သည်များကို ၂ မိနစ်ခန့်ကြာအောင်ထိန်းထားနိုင်ပြီး ၃၀% ပိုမိုပြောင်းလဲကာပျမ်းမျှလက်မှတ်ရောင်းချမှုကို ၁၃% တိုးတက်ခဲ့သည်။
ယခုအခါထိပ်တန်းလက်လီရောင်းချသူများ၏ ၆၈ ရာခိုင်နှုန်းသည် ဗီဒီယိုကိုသုံးသည် သူတို့ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်။
အကောင်းဆုံးသောဗွီဒီယိုသည်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်၌ရှိနေရန်အခွင့်အလမ်းကိုတိုးစေသည် Google ၏ရှေ့စာမျက်နှာ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရလဒ်ကို ၅၃ ကြိမ်ဖြင့်!
ဖောက်သည်များ၏ ၈၅% သည်ကုန်ပစ္စည်းဗီဒီယိုကြည့်ပြီးနောက်ဝယ်ရန် ပို၍ ဖြစ်နိုင်သည်။
Tags: ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေးဗီဒီယိုရှင်းပြဗီဒီယိုရှင်းပြဗီဒီယိုများကဗျာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗွီဒီယိုများထုတ်ကုန်ဗီဒီယိုလက်လီဗီဒီယိုဗီဒီယိုပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းဗီဒီယိုကို seo
Sendwithus: Transactional အီးမေးလ်ကိုတည်းဖြတ်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းနှင့်တိုင်းတာခြင်း
DecideAlready - ပြန်လည်တုံ့ပြန်ချက်ကိုဖမ်းယူခြင်းနှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
မတ်လ 30, 2017 မှာ 10: 56 AM
ဒီလို ဝယ်လိုအား များလာရခြင်းရဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမြဲတစေ တိုးတက်နေတဲ့ နည်းပညာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းမှာ သွားရင်းလာရင်း ဗီဒီယိုကြည့်နိုင်တဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေ ရှိကြပါတယ်။ အလှတရားနှင့် အခြားအချက်များကြောင့် ၎င်းတို့သည် အမှန်တကယ် ယုံကြည်လက်ခံလာသောကြောင့် ဗီဒီယိုများကို ကြည့်ရှုပြီးနောက် လူများ ပိုမိုဝယ်ယူလာကြသည်။ အဟောင်းဖြစ်ရင်တောင် ကောင်းတဲ့ဆောင်းပါးပါ။